उर्जाशिल युवालाई सक्षम बनाउन छौं : श्रेष्ठ | bethanchokkhabar.com
शनिबार, भाद्र १४, २०७६ | १९:३६:४८ |
सरोजकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष
युवा उद्यमी मंञ्च, काभ्रे
मान्छे जन्मिएपछि प्रगती गर्न सकेन भने उसको के अर्थ । युवा अवस्थामा सामाजिक काम गरेन भने त्यो युवा रहला र ? काभ्रेका युवाहरु केही गरौ भन्ने भावना बोकेर युवा उद्यमी मंञ्च स्थापना गरेका छन् । निरन्तर युवाहरुको भावना र उद्यम विकासमा कृयाशिल रहेको मंञ्चको वर्तमान नेतृत्व बनेपा पुलबजारका सरोजकाजी श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।
सरोजकाजी पनि आम युवानै हुन् । तर उनको सोच्ने क्षमता आम युवाको भन्दा फरक छ । युवालाई कसरी सामाजिक काममा लगाउन सकिन्छ भनेर उनी र उनको टिमका साथीहरुले सोच्ने गरेका छन् ।
युवा चलायमान हुनुपर्छ । चलायमान हुन सकेन भने त्यो युवा हुनै सक्दैन । युवालाई चलायमान उद्यमले बनाउँछ । तर उद्यम गर्नको लागि युवाहरुसँग श्रम भएर मात्रै पुग्दैन । उनीहरुसँग सिप त्यत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । हो युवाहरुलाई आईडिया शेयर गर्ने उदेश्यले युवाहरुको संञ्जालनै स्थापना भएको छ । त्योनै काभ्रेको युवा उद्यमी मंञ्च हो । त्यसमा श्रम सिपसँगै पुँजी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर युवाहरुले योजना बनाउने गर्दछन् । योजना बनाउने थलानै वास्तवमा युवा उद्यमी मंञ्च हो ।
उद्योग वाणिज्य संघ काभ्रेले युवाहरुलाई उद्यमी बनाउने उदेश्यले सो संस्थाको स्थापना गरेका थिए । काभ्रेको वर्तमान नेतृत्व बनेपा पुलबजारका सरोजकाजी श्रेष्ठले गरेका छन् । युवाहरु मिलेर केही गरौ भन्ने भावना बोकेका श्रेष्ठ निक्कै उर्जाशिल छन् । सकारात्मक सोच बोकेकै कारण उनीहरु मिलेर सामाजिक कामहरु निक्कै गरिरहेका हुन्छन् । मन्दिर चौताराको सफाईदेखि सामाजिक संञ्जालवाट समेत उनले सचेतना जगाउने काम गरिरहेका हुन्छन् । काभ्रेमा निक्कै संम्भावना बोकेका सरोजकाजी निरन्तर सामाजिक सेवामा अघि बढिरहेका छन् । उनै सरोजकाजीसँग गरिएको कुराकानीको :
० युवा उद्यमी मञ्च के हो र यो किन स्थापना गरियो ?
मञ्च भन्नासाथ हामी एक समुह हौ भन्ने बुभ्नसक्छौ । कस्तो समुह भन्दा जसले मानिस जीवनको एक युवा अवस्थामा उद्यम गरिराखेको अवस्थाको उद्यमीहरुको एक समुह लाई युवा उद्यमी मञ्च भन्न सक्छौ ।
युवा अवस्था आफैमा पनि मानव जीवनको एक सिर्जनात्मक अवस्थाको रुपमा रहेको हुँदा उद्यम, व्यवसाय जस्ता जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिरहँदा उद्यम सम्बन्धी आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण ज्ञानहरु प्राप्त गर्न सजिलो होस् भन्ने ध्येयले काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघद्धारा २०६४ सालमा यस मञ्चको स्थापना गरिएको हो । मंञ्चले सदैव रचनात्मक काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । हामीले उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने र युवाहरुलाई कसरी सामाजिक कार्यमा लगाउन सकिन्छ भनेर प्रयासका थालनी गरेका हौ । हामीलाई सकारात्मक सुझावको अपेक्षा रहेको छ ।
० यो स्थापनाको उद्देश्य हासिल गरेको छ ?
यस मञ्चको स्थापना युवा उद्यमीहरुलाई सफल, योग्य तथा प्रतिस्पर्धी उद्यमी बनाउन सहयोग गर्ने रहेको हुदाँ हाल सम्म यस्ले उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी आवश्यक विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिसकेको छ । स्थापनाकाल देखि हालसम्म यस मञ्चको यात्रामा देशको राजनैतिक विभिन्न अवस्थाले गर्दा सोचेको जस्तो उद्देश्य हासिल गर्न गाह्रो भएको तर अबको अवस्थामा स्थायी सरकार हुँदा उद्यम विकासमा धेरै स्थायित्व तथा कम जोखिमपुर्ण हुने हुदाँ यस मञ्चले युवा उद्यमीलाई चाहिने खालको आवश्यक सम्पुर्ण कार्यक्रम जस्तै कर सम्बन्धी कार्यक्रम, उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम, व्यवसाय नेटवर्क विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु धेरै भन्दा धेरै संचालनमा ल्याउने योजना यस मञ्चको रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
हामीले विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध भएका युवाहरु मिलेर यो संस्था स्थापना गरेका हौ । यसले उद्यमी बन्न सहयोग पु¥याउने भएकाले हामीले साथीहरुलाई निरन्तर सहयोग गर्ने गरेका छौ । ईच्छूक साथीहरुले परामर्श लिन समेत सक्नु हुुनेछ । हामीले युवालाई कसरी बुझेका छौ । त्यो सबैभन्दा पहिला सोच्न आवश्यक छ । हामीले युवालाई जसरी बुझेका छौ युवा त्यो भन्दा फरक हुन सक्छन् । उनीहरु कस्तो परीवेशवाट अघि बढे र कसरी जीवन र भविष्यको बारेमा सोचेका हुन्छन् । त्यसवारे सबैभन्दा पहिला गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
बुबाहरुले जे गर्नु भयो हजुरबुबाहरुले गर्नु भएकै काम हामीले गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने परिपाटीनै गलत छ जस्तो मलाई लाग्छ । युवाले के बिषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ । त्यो बिषयमा उसलाई अवसर प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । उसको रुची अनुसारको अध्ययनको वातावरण दिने हो भने विश्वकै सबैभन्दा योग्य युवा हाम्रो देशमा छन् । तर उनीहरुलाई कसैले विश्वा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
० उद्यम के हो ? यो युवालाई किन आवश्यक देखिन्छ ।
उद्यमलाई सामान्यतया सामानको उत्पादन गर्ने, व्यवसाय गर्ने तथा जोखिम मोल्ने र उक्त कार्यबाट नाफा प्राप्त गर्नेलाई उद्यमका रुपमा परिभाषित गर्नसक्छौ । उद्यमी एक नयाँ विचार, सामान, व्यवसाय, प्रकृया, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति हो । आजको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय परिवेश विश्लेषण गर्ने हो भने देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि उद्यमशीलता विकास नै एक मात्र माध्यम रहेको हामी पाउँछौ ।
अहिलेका विकसित देशहरु चीन, भारत, अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरु सबै त्यहाका जनताहरुको उद्यमको कमाईबाट नै विकाश भएको छ । देशको समृद्धिका लागि एक मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्यम मानव जीवनको एक सृजनशिल युवा अवस्थालाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्न सक्योै भने देशको मुहार फेर्न समय नलाग्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीनले २ दशकको चीनको आर्थिक क्रान्तिले विश्वलाई देखाईदिएको छ । युवा अवस्थामा व्यक्ति एकदम चञ्चल स्वभाव हुने र अस्वभाविक रुपमा शारीरीक तथा मानसिक परिवर्तन तिव्र रुपमा भई रहने हुँदा युवालाई दुव्र्यसन तथा अन्य असामाजिक कार्यबाट जोगाउनका लागि पनि युवा अवस्थामै उद्यमशीलता तिर लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा के हो भने उद्यम गरेको युवाको अवस्था के छ अनि उद्यम विनानै बुबाआमाको कमाईमा रमाउने अवस्थाका युवाहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ । उनीहरु कुलतमा किन फसे । त्यसको कारणको हामीले तलदेखि खोज्नु आवश्यक देखिन्छ । हामीले उद्यम भएका युवाहरुको अवस्था समाजमा के छ अनि बिना उद्यम भएका युवाहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर सोच्न आवश्यक रहेको छ । हो हामीले उद्यममा युवाहरु लगाउन सकियो भने मात्रै पनि कुलत समस्याको समाधान हुन्छ ।
० काभ्रेका ठुला उद्योग मायोज बन्द भयो ? कारखाना खुल्न सकेका छैनन । उद्योग जिवित राख्न युवा उद्यमीको भुमिका कस्तो रहने ?
नेपाल माओबादी द्धन्दबाट धेरै समय आक्रान्त रह्यो त्यस ताका देशमा कुनै किसिमको लगानीको अवस्था थिएन र सामान्य मान्छेले त यो त सोच्न पनि सक्दैन थियो । यस द्धन्दकालमा देशमा धेरै किसिमका विकृतीहरु आए जसमध्ये मजदुर समस्या पनि एक रह्यो । बनेपा स्थित मायोज नुडल्स कारखाना पनि एक पिडित हुनपुगेको हो । त्यस समयमा कारखाना संचालन गरेर कारखाना मालिकहरुले मजदुरहरुको फाईदा उठाई नाफा कमाई रहेको छ भन्ने जस्ता कुराहरु फैलाई मजदुर युनियनबाट विभिन्न प्रकारका मागहरु राखि कारखाना संचालनमा रोक लगाई बन्द गराईएको थियो । जसका कारण त्यस समय देशको विभिन्न ठाँउबाट आएका सयौ जनाको रोजगारी बन्दभएको अवस्था छ ।
जसको प्रभाव अहिले उक्त मजदुरहरु बेरोजगारी भई व्यहोनु परेको हामीले देखिरहेका छौ । अबका दिनहरुमा यस्ता किसिमका कार्यहरु उद्यममा कम्तिमा काभ्रे जिल्लामा नहोस भनी जनचेतनाका लागि यस मञ्चले आर्थिक क्षेत्रमा उद्यमीहरुको आवश्यकता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि संचालनमा ल्याउनेछ । आजका युवा भोलिका नेतृत्व हुने हुँदा युवा उद्यमीले यस्ता ठुला उद्योग संचालन गर्न सहयोग गर्ने तथा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि पनि पहल गर्न यस मञ्च एकजुट भई लाग्नेछ ।
हामीले कसैलाई दोष लगाएको हैन । तर पनि द्वन्द्व एक कारण बन्यो होला । त्यसपछिको लामो समय संक्रमणकालको समयले धेरै युवाहरु पनि वैदेशिक रोजगारमा जान बाँध्य बने । त्यसको कारणले उद्यमलाई अप्ठारो पारेको अवस्था सृजना भएको छ । त्यसैले अब सरकारले उद्योग स्थापनामा निक्कै चासो दिन आवश्यक छ ।
० युवा आफैमा सृजनशिल हुनुपर्छ । युवा उद्यमी मञ्चले कस्तो सृजनशिल देखाएको छ ।
म यस्तो भन्छु कि सृजनशिलताको अर्को रुप नै युवा हो आज विश्वको विकास क्रममा नया कुराको विकास नै युवाहरुको नया सोचले भएको हामी पाउछौ । त्यसैले युवा भनेको एक सृजनशील र उद्यम भनेको पनि एक सृजनशील काम भएको हुनाले यी दुईलाई एकै ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यसले सफलता निश्चित दिन्छ ।
यसै कुरा लाई मनन गर्दै नै यस मञ्चको स्थापना गरिएको हो । यस्ता सृजनशील कुरालाई उजागर तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि यस मञ्चले युवा उद्यमीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धीका रुपमा उभ्याउन हर किसिमको कार्यक्रमहरु, विचारहरु, अन्र्तरक्रियाहरु प्रदान गर्देै आईरहेको छ । अझ हामीले धेरै काम गर्न सकेका छैनौ । हामीले धेरै रचनात्मक कामहरु बाहिर ल्याउन सकेका छैनौ । त्यसका लागि हामीलाई सबैको सुझावको आवश्यक पर्दछ । हामीलाई हजुरहरुको सल्लाह सुझावकै आधारमा अघि बढ्न सजिलो पर्दछ । हामी सुझावको भोका छौ ।
० तपाँईको उद्यमी मञ्चमा कति सदस्य छन् ? सदस्य लिन कस्तो युवा चाहिन्छ ?
अहिले यस मञ्चमा ८० जना उद्यमीहरु सदस्य रहेका छन् र यस मञ्चको सदस्य लिनका लागि उद्यम दर्ताको प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्दछ । उद्यममा हुने जोखिमका कारण युवाहरु आफ्नो उद्यम धेरै समय चलाउन नसके व्यवसाय नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति रहेको हुनाले यहाँका युवा व्यवसायी हरु धेरैको उद्यम दर्ता नरहेको कारणले पनि यस मञ्चमा सदस्य हाल कम रहेको पाईन्छ । यस मञ्चले उद्यमका जोखिम बहन सम्बन्धी कार्यविधि लगायतका कार्यक्रम संचालन गरी युवालाई उद्यम गर्न विश्वस्त बनाई सदस्यहरु वृद्धि गर्ने योजना लिएको छ । हामीले युवाहरुलाई लगानी गर्ने वित्तिकै नाफा भैहाल्छ भनेर कहिल्यै सिकाउन खोजेका छैनौ । हामीले हरेक कुरामा क्रमिक रुपमा सफलता हात पारिन्छ भनेर युवाहरुलाई सिकाउने प्रयासमा छौ ।
० शहरमा मात्रै केन्द्रित रहेको तपाईको संस्था गाँउमा कसरी जान्छ ?
यस मञ्चको कार्यालय शहर क्षेत्रमा भएपनि अहिले मिडिया, सोसियल मिडिया लगायतका माध्यमहरुबाट पनि गाँउहरु तिर पनि सुचना प्रबाह भईरहेको छ ।
मञ्चका हरेक कार्यहरुको सुचना पाईरहेका छन् यदि मञ्चले आयोजना गरिएका कार्यहरुमा गाँउका युवा उद्यमीहरुलाई सहभागी हुन असहज भए यस्ता कार्यक्रमहरु आवश्यक स्थानमै संचालन गरी युवा उद्यमशीलतामा टेवा पु¥याउने छ । हामीले काभ्रेको सबै नगरपालिका÷गाँउपालिकामा पुगेर युवाहरुलाई उद्यमको बिषयमा जानकारी गराउने योजना बनाएका छौ । तर धेरै कुराले शहरका युवाहरुले यसमा धेरै चासो
० तपाँइको संस्थाले गरेको सामाजिक काम के हो ?
यस संस्थाले विषेश गरेर युवा उद्यमीहरुलाई सक्षम बनाउने उद्देश्य लिएको हुँदा सामाजिक कामहरु भन्दापनि उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको छ । जस्तै युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम लगायत काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ द्धारा आयोजित हरेक कार्यक्रमलाई पनि यस मञ्चले युवा उद्यमीहरु विच पु¥याएको छ ।
० तपाँई सहकारी , उद्योगमा लगानी गर्नु भएको छ । युवाले किन उद्यममा जोडिनुपर्छ ? उद्यममा जोडिन चाहने युवालाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ ?
अहिले बनेपा स्थित सक्षम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा कोषाध्यक्षको रुपमा छु र हाल लुनिभा वेभरेज (ब्त्रगब द्यभचन) नामक करिव २ करोड लगानीमा खाद्य तथा गुणस्तर विभाग को सम्पुर्ण शर्तहरु पुरा हुनेगरी खानेपानी, घरमा प्रयोग हुने पानी तथा होटल, कारखानाहरुमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण पानीका सेवाहरु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखी प्रशोधित पानी उद्योग संचालनमा ल्याएको छु । उद्यमले आर्थिक समृद्धिका लागि विषेश भुमिका खेल्छ त्यसैले यस्ता सृृजनशील युवाहरु उद्योगमा जोडियो भने निकट भविश्यमै नेपालमा समृद्धि हाम्रेै पालामा देख्न पाउनेछौ । यदि कोही युवा उद्यममा जोडिन चाहन्छ भने कृपया यस मञ्चमा आबद्ध हुनुहोला र यस मञ्चले आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला त्यसपछि तपाँईको उद्यम गर्दा हुने जोखिम कम गर्नका लागि आवश्यक परामर्श तथा अन्य कुराहरुको सहयोगका लागि यस मञ्च युवाहरुका लागि सधै खुला र तत्पर रहनेछ ।
० काभ्रेमा नयाँ उद्योग किन स्थापना हुनुपर्छ ?
काभ्रेलाई पहिले देखि नै व्यापारिक केन्द्रका रुपमा हेरिदै आएको छ । यहाँका अधिकांश बासिन्दाहरुमा व्यापारिक कारोवारको अनुभव रहेको पाईन्छ यसले गर्दा नयाँ उद्योगहरु संचालन गर्दा जोखिमको अवस्था कम रहनेहुन्छ र उद्यम सफल हुने सम्भावना धेरै रहने हुन्छ । काभ्रेका बासिन्दाहरुको जिवनयापन सहजताका लागि यहाँ उद्योग स्थापना हुनुपर्छ । उद्योगले एक त समृद्धि ल्याउछ र अर्को उपभोक्तालाई सामान खरिदमा, मुल्यमा आदि कुराहरुमा सहज बनाउदछ । अहिलेको परिस्थितिमा त आफ्नो स्थानीय तहबाट आम्दानी भएको कर आफ्नै ठाँउमा विकासका लागि खर्च गर्ने निति भएकोले काभ्रेमा उद्योग स्थापनाका लागि सवैले पहल गर्न जरुरी छ । यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु काभ्रेका सम्पुर्ण स्थानीय निकायहरुलाई कि यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि कसैले स्थानिय निकायमा दर्ता गर्न आए त्यस्ता उद्यमीहरुलाई स्थानीय बातावरणमा कुनै किसिमको झन्भट नहुने विश्वस्त बनाईदिनुस् र फुलमालाले स्वागत गरिदिनुस् जसका कारण काभ्रेमा उद्यमशीलता विकास भई काभ्रे जिल्ला नै समृद्धि तर्फ लम्कनेछ ।
० युवाहरु दुव्यसनमा फसेका हुन्छन् । उनीहरुका निम्ती तपाँइको संस्थाले के सहयोग गर्नेछ ?
दुव्यसन नै युवाको सबैभन्दा ठुलो सत्रु हो । युवाहरु दुव्यसनमा किन लाग्छन् भन्दा जव युवाहरु फुर्सदमा हुन्छ वा बेरोजगार हुन्छन् । यदि युवालाई समयमै उद्यमतिर लगाउन सक्यौ भने दुव्यसनको समस्या नै आउदैन । दुव्यसनमा लागेका युवाहरु यदि दुव्यसन छोड्न चाहन्छ र केहि काम गर्न चाहन्छ भने यस संस्थाले उद्यम सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिदिनेछ अथवा रोजगारी चाहन्छ भने यस मञ्चमा आबद्ध उद्यमी साथीहरुको उद्योगमा रोजगारीको पनि व्यवस्था गर्न यस संस्थाले सहयोग गर्न सक्छ तर त्यस व्यक्तिमा ईमान्दारिता, लगनशीलता र ढृदता हुनुप¥यो ।
० महिलाहरुलाई उद्यममा ल्याउन के सहयोग गर्ने योजना छ ?
आजका युवा महिलाहरु आत्मविश्वासमा पुरुषहरु भन्दा कम रहेको छैन । उनीहरु आफैमा पनि सक्षम छन् र यस मञ्चले पुरुष वा महिला भनी नहेरी मा त्र उद्यमी लाई हेर्छ । यस मञ्चले प्रदान गर्ने सेवाहरु तथा कार्यक्रमहरु पुरुष तथा महिला उद्यमीहरुका लागि बाराबर छन् । यदि महिला उद्यमी केन्द्रित कुनै किसिमको योजनाको आवश्यकता रह्यो भने महिला उद्यमीहरुका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग यस मञ्चले गर्नेछ ।
० अन्त्यमा सबै उद्यमीहरुलाई के जानकारी दिन चाहनुहुन्छ ?
काभ्रे युवा उद्यमी मञ्च एउटा युवा उद्यमीहरुको संगठन हो जस्ले उद्यमीहरुको हितको लागि काम गर्छ र यस पत्रिका मार्फत म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यस मञ्चमा आबद्ध हुँदैमा सफल उद्यमी हुने होईन । यो आफुले गरेको उद्यमलाई सफल बनाउन आवश्यक पर्ने कुराहरुको जानकारी लिने र छलफल गर्ने थलो हो । त्यसैले आउनुस यस मञ्चमा सम्पुर्ण काभ्रे युवा उद्यमी साथीहरु आबद्ध होऔ । उद्यम विकास गरौ र देशलाई समृद्ध तर्फ अगाडि बढाऔ । जय उद्यमी…